I-ASUS Zenfone 6: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Usuku lufikile. Emva kweeveki ngobuninzi bamahemuhemu, I-ASUS Zenfone 6 ityhilwe ngokusemthethweni. Le fowuni ihlupheke ngokuvuza okuninzi kwezi veki, abanye bade baqinisekiswa yinkampani uqobo, Njengobungakanani bebhetri yakho. Ngoku, sinazo zonke iinkcukacha malunga nesi siphelo sitsha sophawu lwesiTshayina. Imodeli enamandla, eneekhamera ezintle.
Ifowuni yayiza kuboniswa eValencia, njengoko kubonisiwe kukuvuza okumbini. Le ASUS Zenfone 6 iboniswa njengokhuphiswano olunokhetho ngaphakathi kuluhlu oluphezulu. Kuba ime ngaphandle kwayo yonke ixabiso elifanelekileyo lemali. Isixhobo esinokuvelisa umdla.
Uyilo yenye yezinto ezinomdla kakhulu kule fowuni. Kungenxa yokuba sifumana inkqubo yeekhamera ezijikelezayo, ezifanayo naleyo sibonile kwi-Galaxy A80. Ke asinayo ikhamera yangaphambili nangasemva, njengoko sihlala sifumana kwezinye iifowuni ze-Android. Kodwa yinkqubo ethembisayo.
1 Ukucaciswa kwe-ASUS Zenfone 6
Ukucaciswa kwe-ASUS Zenfone 6
Ngapha koko, enkosi kolu luyilo, i-ASUS Zenfone 6 iveza isikrini ngaphandle kwazo naziphi na izakhelo, Ukongeza ukungabinayo inotshi okanye ezinye izinto. Ke umphambili wefowuni usetyenziselwa ubuninzi. Kwelinye icala, siyabona ukuba iboniswa njengefowuni yomdla ngaphakathi kwinqanaba eliphezulu le-Android. Oku kukucaciswa kwayo:
Isikrini: 6,4 intshi ngesisombululo: FHD + (2340 x 1080 pixels) kunye neRatio 19,5: 9
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 855 i-core-core
I-RAM: 6 / 8 GB
Ukugcina: I-64/128/256 GB (iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-2 TB ene-microSD)
Iikhamera zangaphambili nangaphambili: I-48 MP + 13 MP ene-Sony IMX58 kunye nokuvula: f / 1.79 kunye ne-Flash ye-LED
Conectividad: I-USB-C, iBluetooth 5.0, iDual GPS, iRadiyo ye-FM, iWiFi 802.11, i-GLONASS
Abanye: Inzwa yangemva yeminwe, i-headphone jack, isithethi esingaphambili esiphambili, i-NFC, iqhosha loMncedisi kaGoogle
Ibhetri: I-5000 mAh ngeNtlawulo ekhawulezileyo ye-4.0 ekhawulezileyo.
Ubukhulu: 158,94 x 75,58 x 9,6mm.
Inkqubo yokusebenza: I-Pie ye-Android kunye neZenUI 6 njengobume bokwenza ngokwezifiso
Sijongene nesiphelo esiphakamileyo esinamandla, esiza neSpapdragon 855, ke ngoko sinomsebenzi omangalisayo kwifowuni ngalo lonke ixesha. Kwelinye icala, iza nendibaniselwano eyahlukeneyo ye-RAM kunye nokugcinwa. Ukongeza, kufuneka sigqamise ibhetri ethi iveliswe yile ASUS Zenfone 6, ngomthamo omkhulu we-5.000 mAh, Ngaphandle kwamathandabuzo ithembisa ukuzimela okuhle. Ngokukodwa kuba sele iza ne-Android Pie ngokusemthethweni, kunye neprosesa inayo. Sikwabiza ngokukhawuleza kuyo.
Iikhamera yenye into ebalulekileyo kwifowuni. Inzwa yesibini, i-48 + 13 MP, isebenzisa inzwa ye-Sony. Ke ngoko, sinokulindela ukusebenza okumangalisayo kubo ngalo lonke ixesha. Ukongeza, njengesiqhelo kwiifowuni ze-Android, sifumana ubukrelekrele bokuzenzela bokuphucula ezi khamera, zinike imisebenzi emitsha kunye nokufumanisa imeko, phakathi kwabanye, umzekelo. Inzwa yeminwe yeminwe ifunyenwe ngeli xesha ngasemva kwefowuni.
Ngokungafaniyo nezinye iimodeli zokuphakama okuphezulu, abakhange babenesibindi sokuyazisa ngaphambili. Phakathi kweminye imisebenzi, sifumana i-NFC yeentlawulo ezihambayo, isithethi esingaphambili esiphambili kunye sineqhosha lokufikelela kuMncedisi kaGoogle kule ASUS Zenfone 6, inkcukacha enomdla kubasebenzisi abaninzi.
Le ASUS Zenfone 6 isungulwe kwiinguqulelo ezahlukeneyo ngokubhekisele kwi-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Ukuze umsebenzisi ngamnye angakhetha leyo ayibona inomdla kakhulu kwimeko yabo. Ukuze uthenge le fowuni akufuneki silinde ixesha elide, kuba sele kunokwenzeka ukuyithenga ngokusemthethweni eSpain.
Iinguqulelo ezintathu zomnxeba ziyathengiswa ngokusemthethweni eSpain. Ke ngoko banokukhethwa. Njengoko besesitshilo, le fowuni iza nefayile ye- Ixabiso lemali elenza libe lelona linomdla kakhulu. La ngamaxabiso enguqulelo nganye yefowuni:
Inguqulelo yefowuni ye-6GB / 64GB: i-499 euro
Imodeli ye-6GB / 128GB inexabiso kwi-559 euro
Imodeli ene-8GB / 256GB isungulwe ngexabiso le-599 euro
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-ASUS Zenfone 6: Isiphelo esitsha sophawu
I-Nubia Red Magic 3 sele inomhla wokukhutshwa